Askarigii Dilay George Floyd oo loo qoondeeyay damaanad $1.25 milyan oo dollar ah — FAAFIYE.COM
Askarigii Dilay George Floyd oo loo qoondeeyay damaanad $1.25 milyan oo dollar ah
Askarigii hore ee booliska Minneapolis ee lagu eedeeyay dilka ninka madow ee aan hubaysnayn ayaa markii ugu horraysay waxaa la keenay maxkamadda halkaas oo damaanadda lagu sii daynayo laga dhigay hal milyan iyo 1.25 milyan oo doolar.
Dacwad oogayaasha ayaa dareemay “culayska uu xukunkan leeyahay “, iyo xiisadda ka dhalatay dilkii loo gaystay George Floyd.
kumannaan qof oo ku sugan gobolka Texas ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay xuskii ugu dambeeyay u samaynayaan George Floyd, oo ah ninkii dilkiisa ay ka dhasheen dibadbaxyada ka dhacaya dunida ee lagu dalbanayo in cadaalad loo helo falalka cunsuriyadda ku salaysan.
Xuska aaskiisa ayaa waxaa lagu qaban doonaa kaniisad ku taal magaalada Houston oo ah halkii uu Mr Floyd ku soo koray.
Caro ballaaran ayaa ka dhalatay tan iyo intii uu baraha bulshada ku baahay muuqaalkii muujinayay qaabka arxan darrada ah ee ay boolika u dileen George Floyd, kaasi oo la arkayay iyadoo askari boolis ah uu luqunta jilibka kaga hayo ninka madowga ah ka hor inta uusan geeriyoon.
Askari Derek ChauvinDerek ChauvinDilka George Floyd